अझै कति चाहिएको हो मन्त्री ?
देउवा सरकारले फेरि तीन मन्त्री थपेर आफ्नै कीर्तिमान तोडेका छन्। सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का तर्फबाट सरकारमा थपिएका तीन
अरुको कमजोरीले हैन आफ्नो विचारले जितिन्छ
चुनाव जित्न अरुलाई गाली गर्ने र अरुको खेदो खन्ने दिन अब गए। राजनीतिक दललाई मेरो अनुरोध, अब यस्तो बन्द गर्नुस्। प्रमुख राजनीतिक दलले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह
कामनपाको गाडी लिलाम प्रकरणः खै त कारबाही ?
करोडौं मूल्यका गाडी कवाडीमा बेच्नेलाई कारबाही नहुने हो त ? काठमाडौं महानगरपालिकाले करोडौं मूल्यबराबरको गाडी कवाडीमा लिलामी गर्यो। वर्षौदेखि थन्किएका ५० थान गाडी लिलामी गरिए। यो विषयमा निकै चर्चा
हालसम्मकै धेरै ८८ किलो सुन महानगरीय अपराध महाशाखाले समात्यो। हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेर प्रशंसा पनि भयो प्रहरीको। यो सुन बरामद गरेपछि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तस्करी गर्दै आएको
प्रमज्यू, सूचना प्रविधिमा ध्यान दिनुस्
प्रधानमन्त्रीका कारण सूचना प्रविधिमा अहिले नेपाललाई धक्का लागेको अवस्था छ। सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्न गठन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद् पनि अहिले निष्क्रिय भएको
किन रोकिन्न पैसा असुल्न ?
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अवस्था छ। यसो भइरहँदा पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएको छैन। बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ जेठ १६
दशैँ–तिहार आयो भन्छन्
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दशैँ–तिहार नजिकिँदै गरेको भान हुन थालेको छ। तर, अतीतमा दशैँ–तिहारको छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। महिनौंअघिदेखि गाउँ–शहरमा दशैँका गीत गुञ्जन्थे। हुने⁄नहुनेहरु कसरी दशैँ–तिहार मनाउने भन्दै योजना बुन्थे।
नेपालमा सीमित दलहरूको मात्र होडबाजी
लोकतन्त्र भनेको सीमित दलहरूको होडबाजी होइन। यथार्थमा लोकतन्त्रको लक्ष्य मात्र देश विकास गर्नु हो, तर हाम्रो मुलुकमा अलि अलग धारणा छ। यहाँ लोकतन्त्र भनेको कांगे्रस, माओवादी, एमाले, तराई मात्रको
दुर्घटनापछिको राहतमा ध्यान देऊ
‘पीडितमाथि भयानक ठट्टा, कहिलेसम्म दिने मान्छे मार्ने लाइसेन्स ?’ शीर्षकको यसै नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको समाचारले मलाई निकै सोचमग्न बनायो। दुर्घटनामा परेर घाइते तथा अंगभंग भएका पीडित परिवारलाई राज्यले के
सरकारले मंसिर १० र ११ गते का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभाको निर्वाचन मिति घो षणा गरे को छ । तर निर्वाचनको तयारीका लागि समे त आवश्यक पनेर् प्रतिनिधिसभा सदस् य निर्वाचन विधे यक अझै पारित भएको
गाउँ–गाउँमा जानुपर्छ स्वास्थ्य बिमा
यस नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा स्वस्थ्य बिमाका समाचार आइरहन्छन्। मैले नियमित पढ्ने गरेको छु। स्वास्थ्य बिमा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको पनि समाचार आएको हुन्छ। यसलाई नियमितरुपमा व्यापक बनाएर सबै नेपालीसमक्ष
रोल्पाको एकमात्र सरकारी अस्पताललगायत गाउँका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ। सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधि पनि अस्पतालमा नभएपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको छ। केही दिनयता
देउवाज्यू, यसरी हुँदैन
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले २३ जना राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद्को आकार ५० सदस्यीय बनाए। भारत भ्रमणमा जानुअघि देउवाले २३ जना राज्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराए। राप्रपाको भागमा राखिएका चार मन्त्रालय खाली